तपाईलाई थाहा छ, बसमा यात्रा गर्दा वान्ता किन आउँछ ? यस्तो रहेछ कारण | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ, बसमा यात्रा गर्दा वान्ता किन आउँछ ? यस्तो रहेछ कारण
बस वा कारमा यात्रा गर्दा रिङ्गटा लाग्ने र वान्ता आउने गर्दछ, यस्तो समस्या धेरै मानिसलाई हुने गर्दछ । वास्तवमा यस्तो मस्तिष्कमा जबरजस्त असरका कारण हुन्छ ।
बस, कार, विमान वा पानी जहाजमा यात्रा गर्ने क्रममा शरीर र मस्तिष्कबीच एउटा असामन्जस्यताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । कार्डिफ युनिभर्सिटीका न्युरोसाइन्टिस्ट डाक्टर डिएन बर्नेटका अनुसार यात्राका क्रममा दिमागलाई यस्तो लाग्दछ , जस्तो शरीरमा विष फैलिरहेको छ । ज्यान बचाउनका लागि मस्तिष्क हर्कतमा आउँछ । म चञ्चल हुन्छ र वान्ता जस्तो आउन लाग्दछ । यसरी दिमागले शरीरबाट विषालु तत्व बाहिर निकाल्ने कोशिस गर्दछ।
तर दिमागलाई यस्तो के संकेत प्राप्त हुन्छ ? यसका कारण सम्झाउँदै डाक्टर बर्नेट भन्छन् कि यात्राका क्रममा सिटमा बसेका मानिस स्थिर हुन्छन् । तर कानले लगातार गतिको आवाज मस्तिष्कसम्म पुराइरहेको हुन्छ । कानले दिमागलाई भन्छ कि हामी गतिशील छौ । एकातिर शरीर स्थिर हुन्छ भने अर्कातिर गतिसँग सम्बन्धित जानकारी । यही परस्पर विरोधभासी जानकारी प्राप्त भएका कारण मस्तिष्कलाई लाग्छ कि केही त गडबड भइरहेको छ।
आमरुपमा बालबालिका वा कम यात्रा गर्नेहरुलाई यस्तो समस्या बढी हुन्छ । डाक्टर बर्नेटका अनुसार बालबालिकाको दिमाग विकास भइरहेको हुन्छ, उनीहरुमा यात्रा गर्ने बानी हुँदैन । त्यसैले बाल्यकालमा यस्तो कठिनाइ बढी हुन्छ । तर विस्तारै विस्तारै उमेर बढ्ने र यात्राको अनुभव बढ्दै जाँदा मस्तिष्कले बुझ्ने र तालमेल कायम गर्ने गर्दछ । एजेन्सी
Previous post: के आइमाई साँच्चिकै धोकेबाज नै हुन्छन् त ? अध्ययनहरुले यसो भन्छ
Next post: अमानवीयताको सीमापारः काटेको खुट्टा सिरानी हालिदिएपछि….